YAA OROMTITTII KA’I* – Welcome to bilisummaa
YAA OROMTITTII KA’I*
bilisummaa March 14, 2014	Leave a comment
Yaa dubartii Oromoo
Hundee sabaa fi qomoo
Abdii keenya sabbittii!**
Oromtittii harmee biyyaa
Ijjeen teenya yaadha firaa
Dhagayi shoolee tiyyaa
Anoo cinqameen iyyaa!
Gateettiin na dhukkubee
Harqootan narra jiraa
Miilli-koo na guggubee
Yaa dubartii ilmoo namaa
Yaa dubartii hundee namaa
Jarri kun sitti gamaa
Waraanee si madeessee
Akka qoree arangamaa!
Guutuu-dha mirgi kan-kee
Eenyuyyuu irraa hin hirdhisuu
Eenyumtuu golatti sin-deebisu!
Waaberraa kaasee Omoo
Abdii sabaa fi qomoo
Ka’iitii nu kaasi-kaa
Manaa gannu baasi-kaa!
Dhiirri walta’uu didee
Jaarmaan walta’uu didee
Kaan diina jala fiigaa
Kaan waan qabnu diigaa
Akka gaafa Gullallee***
Tan wajjumaan guddannee!
Mundhii-tee qalloo sana
Quba-kee qalloo sanaan
Siiqqee qalloo qabaddhuu
Deddeemii biyya labsii
Isa rafes dammaqsi!
Eeboos qapphuu garmaami
Akka Biiftuu Amoosaa
Yoom taate-ree qoosaa?
Giitii seenaas qabi
Akka Geexee Walee
Bacoo-yeeyyiin biyya galee!
Qubaan qaataa qabaddhuu
Akka Saartuu, akka Saartuu
Ishii yeroo san gabrummaa
Qabdee, qabdee dhaantuu!
Ayyee, Oromtittii ka’i
Darbaddhuu achi ha’i!
Ol-jedhiitii deemi, deemi
Beenu-kaa deemi, deeme
Barliin, 08. 03. 14
************** Hubachiisota Miiljalee **************
* Walaloon kun “Ayaana Dubartoota Biyyalafa” sababeeffachuun, gaafa 08. 03. 14, qopphii “Tokkummaan
Dabartoota Oromoo Barliin” kurfeesse irratti kan dubbifame ture.
** Sabbuu = sokoo, dahaba, warqii
*** Ka’iisa diddaa gabrummaa, isa bara 1878 keessa Oromoonni Kurnan Gullallee dagabaafattota Habashaa irratti adeemsisan keessatti, shoorri dubartootaa isa hangafa ture. Isaantu dhiirota xiiqii fi booree garaa kaayee, fincila daran cimaa sana akka warra Minilik irratti oofan taasise. Kana malees, mallii fi tooftaan Oromoonni Gullallee kanneen meeshaa waraanaa kan ammayyaa waan tokkollee hin qabneeyyu, waraana Minilik isa mataa irraa hamma miila isaatti, meeshaa ammayyaa warri Oroppaa kennaniif sana hidhate mowuu dandayan kana irraa, nuti waa barachuun hardhas ittiin dhimma-bawuu dandeenya. Waayee kanaa: “Taammanaa Bitimaa, “SEENAA FINFINNEE SHAGGAR“, MANDIISUU, Hidhaa 6, Lakk.1, Bitootessa 2004, fuulee 10-29″, mee ilaalaa!
**** “odoo” = dhayii (“garden“)
Previous Barreeffama Obboo Juneddii Saaddoorratti dhiyaate
Next No Oromo has constitutional or legal protection from the cruelty of the TPLF/EPRDF regime